Manje I-jw.org Isifundwa Ngezilimi Ezingaphezu Kuka-300!
ULIMI ISpanishi Isi-Albania Isi-Amharic Isi-Arabhu Isi-Armenia Isi-Azerbaijani Isi-Azerbaijani (SesiCyrillic) Isi-Ewe Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Oromo Isi-Osset Isi-Ukraine Isi-Uzbek IsiBhunu IsiBislama IsiCebuano IsiChewa IsiChol IsiChuvash IsiCreole SaseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanishi IsiDashi IsiFante IsiFinishi IsiFulentshi IsiGalicia IsiGeorgia IsiGreki IsiGun IsiHiligaynon IsiHungary IsiJalimane IsiJapane IsiKabyle IsiKannada IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiKpelle IsiKrio IsiLithuania IsiMacedonia IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiMam IsiMingrelia IsiMyanmar IsiNahuatl (Saphakathi Nezwe) IsiNgisi IsiNorway IsiNtaliyane IsiNzema IsiPedi IsiPidgin SaseSolomon Islands IsiPolishi IsiPunjabi IsiPutukezi IsiRashiya IsiRomania IsiSamoa IsiSerbia IsiSerbia (SesiRoma) IsiShayina SesiMandarin (Esenziwe Lula) IsiShayina SesiMandarin (Sezinhlamvu Zakudala) IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (SaseLesotho) IsiSwahili IsiSwidi IsiTagalog IsiTahiti IsiTajiki IsiTankarana IsiTarascan IsiTatar IsiTelugu IsiThai IsiTojolabal IsiTonga (SaseMalawi) IsiTotonac IsiTsonga IsiTswana IsiTumbuka IsiTurkey IsiTzeltal IsiTzotzil IsiValencia IsiVezo IsiWallis IsiWelsh IsiXhosa IsiZulu
Uma uchofoza ohlwini lwezilimi engosini ethi-jw.org, uzobona uhlu lwezilimi ezingaphezu kuka-300—okuyinto engavamile kwezinye izingosi!
Ezinye izingosi ezidumile zinezilimi ezingaki? Cabanga ngalokhu: Ngo-July 2013, ingosi yase-United Nations yayitholakala ngezilimi eziyisithupha. Ingosi esemthethweni ye-European Union, i-Europa, yayifundwa ngezilimi ezingu-24. I-Google yayinezingu-71, iWikipedia yona inezingu-287.
Kuwumsebenzi othatha amahora amaningi ukuhumushela ingosi ezilimini ezingaphezu kuka-300! Omningi walo msebenzi wenziwa amakhulu oFakazi BakaJehova emhlabeni wonke abafuna ukuletha udumo kuJehova. Abahumushi bolimi ngalunye basebenza emaqenjini ahlelwe kahle, basebenzise amakhono abo ukuze bahumushe besusela esiNgisini.
I-jw.org inamakhasi amaningi okwaziswa ahunyushelwa ezilimini ezingaphezu kuka-300, ngakho maningi kakhulu amakhasi akule ngosi—angaphezu kuka-200 000!
I-jw.org ayigcini nje kuphela ngokutholakala ngezilimi eziningi kodwa futhi iyathandwa kakhulu. La maqiniso avezwa ukuhlaziywa kwezingosi okwenziwa i-Alexa, inkampane ehlola izinga okusetshenziswa ngalo i-Internet emhlabeni wonke. Uhlu lwayo oluthi “Religion and Spirituality” lunezingosi ezingu-87 000, kuhlanganise nezamasonto amakhulu omhlaba, ezabanyathelisi bawo nezinye izinhlangano ezithi azifane nawo. Kulolo hlu, ngo-July 2013, i-jw.org yaba ngeyesibili! Eyokuqala kwaba ingosi yezinguqulo ezihlukahlukene zeBhayibheli.
Ngo-October 2013, i-jw.org yayivulwa abantu abangaphezu kuka-890 000 ngosuku. Sizoqhubeka sinikeza ukwaziswa okuwusizo okuseBhayibhelini mahhala okuyotholwa abantu kuyo yonke indawo.
I-JW.ORG—Yenza Ukuphila Kwabantu Kube Ngcono